होसियार सिंहदरबार ! इतिहासका निर्माता जनता हुन्
कृष्ण गिरी काठमाडाैं, ७ वैशाख
पुँजीपतिहरूले आरोप लगाउने गरेका थिए– कम्युनिस्टले देशको भावनालाई नै मेटाइदिन्छन् । यसको जवाफमा माक्र्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा लेखेका छन्, ‘श्रमजीवीहरूको कुनै देश हुँदैन । जुन चीज उनीहरूसँग छँदै छैन, त्यसलाई कसले खोस्न सक्छ ?’
हो, अहिले नेपालमा पनि यस्तै दृश्य देखिइरहेको छ दैनन्दिन । यहाँ न त श्रमजीवी मजदुरको देश नै देखिएको छ, न त खोस्नलाई केही चिज नै छ । त्यसैले त होला, जति दुःख कष्ट सहेर भए पनि हिँडेरै सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको बाटो तय गरेर गाउँसम्म पुग्न तयार छन् मजदुर ।
हो, सधँै टिलिक्क टल्किने कार, बस, माइक्रो भ्यान दगुर्ने सडकमा पानी पिएर सास धान्दै घर पुगेर परिवार भेट्ने आसले गाउँ फर्किएका श्रमिक मजदुरको ताँती देखिन थालेको छ । काम र माम दुवै नपाएर कोरोनाको त्राससँगै घर पुग्ने आसमा सडकमा समूहसमूहमा पोकापुन्तुरा बोकेर हिँडिरहेको दृश्यले अनलाइन, पत्रपत्रिका र टीभी च्यानलका लागि खुराक बनेका छन् तिनै मजदुर ।
यी दृश्य हेर्दा कुनै उपन्यास पढेभन्दा हजारौँ गुणा कारुणिक छन् । यी दृश्यले गणतन्त्र नेपालको १० वर्षको जिउँदो जाग्दो इतिहास बोलिरहेको छ । यी दृश्य हेर्दा कसको मन रूँदैन होला र ?
सानासाना छोराछोरी काँधमा बोकेर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, रूकुम, रोल्पाका लागि पाइला अगाडि बढाएका ती मजदुरलाई सोध्दा एउटै जवाफ आउँछ– खान र बस्न समस्या भयो, अनि घर हिँडेका हौँ ।
के साँच्चै यी हिँडिरहेका मजदुरहरूले झुट बोलेका हुन् त ? अहिलेको अवस्थामा बीच सडकमा ताँतीका ताँती हिँडिरहेका मजदुरहरूको त्यो दृश्यले यहाँ राज्य, देश र राजनीतिक नेतृत्व नै नभएको सन्देश दिएको छ । यदि यहाँ जिम्मेवार राज्य र शासक थिए भने यस्तो महामारीमा काँधमा साना बालबच्चा बोकेर आमाहरू सयौँ किलोमीटरको पैदल यात्रामा निस्कँदैनथे होलान् । लकडाउनको अवस्थामा अहिले हिम्मत कसेर धक फुकाएर सडकमा निस्केर हिँड्न कसले आँट गरेको छ ?
आज विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लकडाउनमा छ । मर्नेहरूको संख्या १ लाख ५ हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । मै हुँ भन्ने शक्तिशाली देशहरूको त कम्मर भाँचिएको छ, कोरोना भाइरसका कारण । हामी त झन् विकासशील देशमा पनि पुग्नै बाँकी छ ।
कुनै पनि देशका नागरिकले यस्तै विषम परिस्थितिमा नै राज्यबाट सहयोगको आशा गरेका हुन्छन् । र, राज्यले पनि नागरिकका लागि राज्य छ भन्ने अनुभूति हुने गरी साथ र सहयोग दिने बेला पनि यस्तै बेलामा हो ।
यस्तो बेलामा आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र राज्यले सम्झेनन् भने नागरिकले के सोच्लान् ? संकटको समयमा राज्यले साथ देओस् भन्ने चाहन्छन् जनताले । यति हो नागरिकले गर्ने आस पनि । तर, यस्तो अवस्थामा श्रमजीवी वर्गको कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डै दुईतिहाइको सरकार भएर पनि मजदुरले राज्य र सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन् ।
उनीहरू बसिरहेको ठाउँमा बास र गाँस नपाउने अवस्था सिर्जना भएर पोका पुन्तुरा बोकेर हिँडिरहँदा शासक भने टेलिभिजन र इन्टरनेटको माध्यमबाट सन्देश जारी गर्दै बसिरहेको देखिन्छ । यो एकदमै लज्जास्पद कुरा हो ।
गरिबका पक्षमा लडेका नेताहरू र मजदुरको हकहितका लागि लडेका नेताहरू नै अहिले सिंहदरबार र बालुवाटारमा छन् । तर गरिब जनता भने सडकमा सयौँ किलोमिटर भोकभोकै, प्यासै हिँड्न बाध्य छन् । यी गरिब मजदुरका आँसुको मूल्य वर्तमानका शासकले अवश्य चुकाउनुपर्छ । हिटलरले त अन्तिममा आत्महत्या गर्नुपरेको थियो भने नेपालका शासकहरू कुन खेतका मुली हुन् र ? अन्ततः निर्णायक त जनता नै हुन् ।
कोरोनाको सन्त्रासभन्दा शक्तिशाली भएर आएको छ गरिबहरूका लागि बास र गाँस । यदि कोरोनासँग लड्ने हो भने बास र गाँस अति आवश्यक छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि पूरा नगरेको कुरा अब कुनै पत्रपत्रिकाले लेखिरहनु पर्दैन । शासकहरूका अगाडि नै छर्लङ्ग छ । शासकहरूले बार्दलीबाट हेरे हुन्छ, चीनको वुहानबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुन्जेलसम्ममा केकति तयारी गरियो र जनता कत्तिको ढुक्क छन् भनेर ।
हामी दैनिक पढिरहेका छौँ, दृश्यहरू हेरिरहेका छौँ । यहाँ कति मनहरू भक्कानिएका छन् । कति नागरिक बस्ने घरबाटै निकालिएका छन् भने केही खान नपाएर शहर छोड्न बाध्य भएका छन् । तर, सरकार अथवा राज्यले भरोसा दिलाउने कुनै काम गरेन । राहत बाँडे पनि वास्तविक पीडित मजदुरसम्म पुग्न सकेन । जसले गर्दा खानै नपाएर अस्थायी बास छोडेर मजदुरहरू पैदलै गाउँतर्फको यात्रामा हिँडेका छन् ।
तिनै जनताले जिताएको कम्युनिस्टको सरकार छ । सरकारमा बसेकाहरूले हिजो बाँडेका सपना अहिले नागरिकले खोजेका छैनन्, केवल राज्य भएको अनुभूति खोजेका हुन् । तर, त्यही राज्य भएको अनुभूति गर्न नसकेपछि गरिब मजदुरहरू अहिले सडकमा देखिएका छन् । तिनीहरूका लागि कोरोनाभन्दा ठूलो महामारी त गाँस र बास भोक बनेर आएको छ । भोक त आतंकै बनेर आएको छ । तर, राज्यले न त गाँस, न त बासकै व्यवस्थापन गर्न सक्यो । बरू खानै नपाएर गाउँतिर पैदलै भए पनि जान सडकमा निस्केका तिनै मजदुरमाथि सरकारले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
आममानिस नेपालमा आफ्नो कामधन्दामा थिए । फागुनमा यसको कुनै शंकै थिएन । सरकार पनि यसबारेमा सोच्न चाहँदैन थियो । जब विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई अति जोखिममा राख्यो, त्यसपछि मात्र सरकारको चेत खुलेको हो ।
यदि सरकारले होसियारी मात्र अपनाएको भए आज नेपालमा यस्तो भयावह अवस्था आउने नै थिएन । समयमा एरपोर्ट र सिमानामा कडाइ गर्दै नेपाल भित्रिने सबैको दैनिक डाटा राखेर क्वारेन्टाइन राख्ने व्यवस्था गरेको भए यो अवस्थै नआउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
ढिलै भए पनि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । फागुनको मध्यसम्ममा त सरकार कुम्भकर्णको निद्रामा थियो । धन्न डब्लूएचओले कुम्भकर्ण निद्राबाट जगाइदियो । सरकार निन्द्राबाट जाग्दा डब्लूएचओले ३ अर्बजतिको सहयोग पनि घोषणा गरिसकेको थियो ।
सरकारले आफैँले पहल गरेर अहिलेसम्म उपचारमा चाहिने स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन गरेको पहल पनि विवादित बन्यो ।
विश्वभरमा मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरू जनताको जीवन कसरी बचाउने भनेर नखाई नसुती अहोरात्र लागेका छन् । आँट गर्न नसक्नेहरूले राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिसकेका छन् । केही ठाउँमा लकडाउन उल्लंघन गर्दा मन्त्रीबाट घटुवा भएर राज्यमन्त्री बनेका छन् । तर, नेपालमा भने मिडियादेखि आममानिसमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति छताछुल्ल हुँदासमेत लाजै पचाएर पदमै आसीन छन् ।
यस्तो संकटको घडीमा जनताको साथ पाएको सरकारले काम होइन, खेलाँची गरिरहेको छ । यसको परिणाम त अवश्य भोग्ने नै छन् । आउँदा राजनीतिक पुस्ताले पनि यिनको भ्रष्टाचारा र अनियमितताको शिकार भइरहनुपर्नेछ ।
कोरोनाको महामारीले नै पुष्टि गरिदिइसकेको छ, यिनले धनको महल जति ठूलो बनाए पनि मृत्युको बाटो एउटै हो, मर्दा कसैले धनसम्पत्ति लिएर गएका छैनन् । अर्को कुरा, अहिले बालुवाटार र सिंहदबारमा बासस्थान जमाएकाहरूको त्यो स्थान पनि स्थायी होइन । तर, जनता स्थायी हुन् । जनतालाई सिंहदरबार र बालुवाटारबाट गलहत्याउने अधिकार केवल जनतासँग मात्र छ । त्यसैले जनता इतिहासका निर्माता हुन् ।
इतिहासको पानामा १ सय ४० वर्षे राजतन्त्र थन्किएको छ । जनताका आँसु दुःख देख्ने गरी ब्यूँझ शासकहरू, आफ्नो अहिलेको स्थानलाई यथास्थान राख्ने समय पनि यही नै हो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ७, २०७७, ११:४५:००
ट्रम्पले आतङ्कवादी भनेको सङ्गठन एन्टिफा के हो ?
पार्टी भन्छ: संसदमा निर्णय, सांसद भन्छन्: पार्टीले गरोस्
नख्खु जेल ‘ब्रेक’को त्यो सकस
राजपा–समाजवादी एकता : नीति छैन, मूल नेता अझै भेटिएनन्